Malunga nathi -Shenzhen Yuxingyuan Isipho Packaging Co., Ltd.
I-Shenzhen Yuxingyuan Isipho Packaging Co., Ltd.yishishini lokushicilela kunye nokupakisha kwishishini lokudibanisa uyilo, ushicilelo kunye nolwenziwa emva. Ingcali ekuprintweni kwazo zonke iintlobo zeebhokisi zokupakisha, iibhokisi zemibala, iibhokisi zekhadi, amakhadi ombala, iialbham zentengiso, iithegi, iincwadana zemigaqo, iingxowa zephepha, izitikha, incwadana, izincamathelisi zomvambo, iialbham zemifanekiso, iibhokisi zezacholo, iibhokisi ze-boutique, iibhokisi zezipho, kunye nezinye eziprintiweyo izixhobo. Inkampani ihlala ithatha ukuphuculwa kweshishini lokushicilela lobugcisa obuphezulu njengolwalathiso lwenkqubela phambili, lihambisana namaxesha, kwaye liqhubeka nolwazi lweshishini lokushicilela kunye neendlela ezikhoyo. Okwangoku, inkampani inombala ogqwesileyo wehlabathi onemibala emine, enemibala emihlanu, enemibala emithandathu ye-Heidelberg kunye ne-Komori, kwaye ukwaziswa kwangoko kwabaprinta be-KBA baseTaiwan abasebenza ngokupheleleyo banokuhlangabezana ngokupheleleyo nemveliso eyahlukeneyo enkulu, ephakathi kunye encinci iibhokisi, kunye nezahlulo eziphambili zangaphambi kokushicilela, ukuprinta ngaphakathi, kunye nezixhobo zokwenza umsebenzi emva kokucinezela ukuhlangabezana nokuphuculwa okuqhubekayo komgangatho wabathengi kunye nebango lenkonzo.
Ukusukela oko yasekwa, le nkampani ibambelele kwifilosofi yeshishini "yentsha, ukusebenza ngokukuko, umgangatho, inkonzo", izixhobo eziphambili zokuprinta, inqanaba lobuchwephesha, kunye nokusebenza ngokugqibeleleyo ukubonelela abathengi ngoshicilelo oluphezulu kunye neemveliso zokupakisha kunye neenkonzo. Zonke zamkelekile ukuba zityelele kwaye zikhokele! Ukuzimisela ukusebenza nawe ukwenza ingomso elingcono.
Qhubeka nokwenza izinto ezintsha, uqhubele phambili, uzigqithile, kwaye usiba mkhulu kwaye womelele. Hlala unombulelo kwaye uzalisekise uxanduva kwezentlalo. Lwela iziphumo ezilungileyo kwaye ubuyise abathengi kunye nabatyali mali.
Kubathengi, sikhuthaza ukuxhamla kunye kwaye sifuna uphuhliso oluqhelekileyo kwintsebenziswano. Kwiimanyano, sikhuthaza ukhuphiswano ukukhuthaza intsebenziswano kunye nokwakha ukuphumelela. Kubaqeshwa, khuthaza abasebenzi ukuba bakhule kunye nenkampani. Eluntwini, thetha ngokuhlalisana ngokuvisisanayo kwamashishini kunye noluntu.
Umoya wethu Funa utshintsho kwezimvo, izimvo ezintsha, amanyathelo okuyinyani, kunye nokucokiswa komsebenzi. Phambili ngamaxesha, thabatha amathuba, ulungelelanise amanyathelo kwiimeko zalapha ekhaya, kwaye wenze izinto ezintsha ngelixa utshintsha.
Bamba imeko iyonke, nikela ingqalelo kwiinkcukacha, usukele ukugqibelela, kwaye ubonise ukugqwesa.
I-Shenzhen Yuxingyuan Gift Packaging Co., Ltd. ibambelela kumgaqo-nkqubo "wokuthatha inxaxheba ngokupheleleyo, ukuphucula okuqhubekayo, kunye nokufezekiswa kwazo zonke izithembiso kubathengi", kwaye iseke inkqubo yoqinisekiso lomgangatho epheleleyo kunye nenkqubo yexabiso elongezwe ngeenkonzo. Ngokugqibeleleyo yenza ishishini lama-albhamu emifanekiso, amaphepha ombala, iimagazini, iiposta, iincwadana zemveliso, iibhokisi zezacholo ezintle, iingxowa zamaphepha ezintle, iibhokisi zemibala yokupakisha, iibhokisi zezipho ezigqibeleleyo, iincwadana ezintle, izitikha, izitikha zomvambo, njl. Ngokuhambelana nomxholo wenkonzo. of "ukunyaniseka", "ukuthembela", "umdla", "umgangatho" kunye "nokusebenza", ingqiqo yolawulo yokufuna ukugqwesa, umgangatho wokuqala, ngokusekelwe kwisiseko, ukuphuhliswa kwezinto ezintsha, ukuxhomekeka kulawulo lwezesayensi kunye nezixhobo eziphambili, iteknoloji ephezulu, ephezulu Inkonzo yokulingana, iphumelele ukwamkelwa kwenani elikhulu labathengi, iphumelele igama eliphezulu lokuthengisa kunye nokuthembeka.
Inkampani ihlala ikholelwa ekubeni "umgangatho bubomi bemveliso, kwaye ukuthembeka lilitye lembombo lweshishini". Siza kwenza umfanekiso ogqibeleleyo wolwaneliseko lwabathengi ngenkonzo yodidi lokuqala, ulawulo lodidi lokuqala, kunye nomgangatho wokuqala, kwaye sizalisekise ulwazi lomgangatho kuyo yonke inkonzo yeemveliso zokuprinta, siphumelele ukuthembela kunye nenkxaso yabathengi ngengqibelelo, kwaye yenza ingomso elingcono nabathengi. Ngokunyanisekileyo samkela abantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba batyelele kwaye basebenzisane!